'हजारौं युवा स्वदेश फर्कंदै, प्रदेशमा छैन व्यवस्थित क्वारेन्टाइन'
निको भएका ६१७९००६
अपडेटः साेमबार, असार २२, २०७७ । ११:१३ बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
'हजारौं युवा स्वदेश फर्कंदै, प्रदेशमा छैन व्यवस्थित क्वारेन्टाइन' केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन : मुख्यमन्त्री राउत
नेपाल लाइभ मंगलबार, जेठ २०, २०७७, २०:१६
काठमाडौं- कोरोनाका कारण ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू समस्यामा परेका छन्। महिनौंदेखि उनीहरू अलपत्र अवस्थामा अड्किएका छन्।
सरकारले समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। अब केही दिनमै विदेशबाट युवाहरू स्वदेश फर्काउन सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विदेशबाट फर्काइएकाहरूमध्ये पैसा तिरेर बस्न सक्नेलाई होटल क्वारेन्टाइनमा राखिने र समस्या परेर फर्किएकाहरूलाई स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ। तर विदेशबाट हजारौंको संख्यामा फर्किने युवाहरूका लागि प्रदेश- २ मा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नभएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।
विदेशबाट प्रदेश २ मा कति युवाहरू फर्कन्छन्?
‘प्रदेश नम्बर २ बाट विदेशिनेहरू सामान्य अवस्थाका युवाहरू बढी छन्। विशेषगरी उनीहरू लेवर कामका लागि मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा पुगेका छन्’ मुख्य मन्त्री राउतले भने।
उनका अनुसार मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुकमा मात्रै प्रदेश नम्बर २ बाट ५ लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशिएका छन्। विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसका कारण पनि मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुकमा रहेका श्रमिक वर्ग नै सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। यी मुलुकहरूमा लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएर फर्किने अवस्था सिर्जना भएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको एक अध्ययनअनुसार मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुकबाट मात्रै ५ लाख युवाहरू रोजगारी गुमाएर फर्किने अवस्था रहेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको अवस्था हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी संख्यामा युवाहरू प्रदेश नम्बर २ बाट नै विदेशिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
जसले गर्दा पनि रोजगारी गुमाएर वा विभिन्न समस्याका कारण प्रदेश नम्बर २ मा हजारौं युवाहरू तत्काल फर्कन सक्ने देखिएको छ। यसरी विदेशबाट फर्किने युवाहरूका लागि व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको निमार्णमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामी कोरोनासँग जुधिरहेका छौं तर हामीले तयार पारेको क्वारेन्टाइन क्वारेन्टाइनजस्तो छैन। विदेशबाट आउनेहरूलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौं तर कहाँ राख्ने? उचित क्वारेन्टाइन छैन।’
केन्द्र सरकारको असहयोग
कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई असहयोग गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको आरोप छ।
‘हामीसँग दक्षजनशक्तिको अभाव छ, स्रोतसाधन सिमित छ। जहाँसम्म संघीय सरकारको सवाल छ। संघीय सरकारले कति पैसा पठाएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने जवाफ आउँछ शून्य’ उनले भने।
यो प्रदेशका जनताको रक्षाका लागि आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म राहत वितरणलगायत सहयोग पुर्‍याएको उनको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारले प्रदेशमा के आवश्यक छ भनेर एकपटक पनि सम्पर्क नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले दुःख व्यक्त गरे। स्रोत साधन तथा दक्षजनशक्तिको अभावका कारण क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।
विदेशमा समस्या परेका युवाहरूलाई सरकारको उपेक्षा
सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेमा स्वदेश फर्किन्छु भन्दा अवरोध खडा गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘जसले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण यहाँ बस्नेहरू चिल्लो गाडीमा चढेर हिँडेका छन्। जसले विदेशमा पसिनासँग साटेको पैसाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलोे योगदान पुर्‍याएको छ‚ उनीहरूलाई नै स्वदेश फर्कन्छुभन्दा अवरोध गरियो।‘
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको सीप प्रदेशमै परिचालन गर्ने तयारी
प्रदेश नम्बर २ बाट विदेशिनेको परिवार विशेष गरेर कृषि पेशामा आबद्ध छ। प्रदेश नम्बर २ कृषिका लागि उर्वर समेत भएकाले विदेशबाट फर्किएकालाई कृषि पेशामा आबद्ध गराउने योजना बनाएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ। उनीहरूका लागि सरलकर्जाको व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरूको सीपअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउने र प्रदेशभित्रै विदेशबाट सिकेर आएको सीप परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए।
आँप दिने बाहाना बनाएर भएको थियो कन्चनको बलात्कारपछि हत्या, पक्राउ परे भारतीय नागरिक
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा कैलाश खड्का र हेम गुरुङ मनोनित
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा कैलाश खड्का र हेम गुरुङ मनोनित वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा वरिष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हेम गुरुङ र स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्का मनोनित भएका छन्। श्रम, रोजग... सोमबार, असार २२, २०७७
भारत बन्यो कोरोनाबाट बढी प्रभावित विश्वकै तेस्रो मुलुक संक्रमितको संख्या ६ लाख ९७ हजार ४ सय १३ पुगेसँगै भारतले रुसलाई समेत पछाडि पारेको हो। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांकअनुसार रु... सोमबार, असार २२, २०७७
एसइईकाे नतिजा साउन १५ मा प्रकाशन गर्ने बोर्डको तयारी एसइईको नतिजा साउन १५ गते प्रकाशन गर्ने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ। बोर्डका सचिव दुर्गाप्रसाद अयार्लका अनुसार असार म... सोमबार, असार २२, २०७७
आँप दिने बाहाना बनाएर भएको थियो कन्चनको बलात्कारपछि हत्या, पक्राउ परे भारतीय नागरिक सोमबार, असार २२, २०७७
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा कैलाश खड्का र हेम गुरुङ मनोनित सोमबार, असार २२, २०७७
भारत बन्यो कोरोनाबाट बढी प्रभावित विश्वकै तेस्रो मुलुक सोमबार, असार २२, २०७७
खर्चको दबाब : सार्वजनिक संस्थानबाट तत्काल सबै कर उठाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय सोमबार, असार २२, २०७७
स्थायी कमिटी स्थगित गरेर अध्यक्षद्वयकाे बैठक बालुवाटारमा सोमबार, असार २२, २०७७